“မျက်စိမှုန်သူများအတွက် ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်(သို့) နတ်မျက်စဉ်း” -
“မ နက် စော စော မှာ စံ ပယ် ပင် က စံ ပယ် ပန်း (၃) ပွင့် ခူး ယူ ရ မယ်။ ရေ ပြောင် အောင် ဆေး ရ မယ်။ စံ ပယ် ပင် မ ရှိ တဲ့ သူ က လဲ စံ ပယ် ပန်း ရောင်း တဲ့ ဆီ က ဝယ် ပေါ့။
ဒါ ပေ မယ့် ခပ် လတ် လတ် ကို ဝယ် ပါ။ နွမ်း ရင် မ ယူ နဲ့။ “အဲ ဒီ စံ ပယ် ပန်း ကို ဖန် ခွက် အ လွတ် တစ် ခု မှာ ထည့်ရ မယ်။ နောက် ရေ သန့် သန့် ဖန် ခွက် (၃)ပုံ (၂)ပုံ ထည့် ရ မယ်။
တစ်နေ့လုံး စိမ်ထားရမယ်။ညမှာ မျက်စိကို ခတ်ခါနီး ပန်းကို ဖယ်ပစ်လိုက်၊ အဲဒီရေကို အဲဒီည မျက်စိကို ခတ်။
ပထမဦးဆုံး ခတ်တဲ့နေ့ နံနက်မှာ မျက်စိမှာ ထူးထူးခြားခြား မျက်ချေးတွေ ပိတ်နေလိမ့်မည်။
အဝတ်ပွတစ်ခုကို ရေဆွတ်ပြီး မျက်စိကို ပွတ်သတ် သန့်ရှင်းမှု လုပ်ပေးရမယ်။
အဲဒီပန်းစိမ်ရေကို (၇) ရက်ဆက်တိုက် ခတ်ပေးရမယ်။ မျက်ချေးက တစ်နေ့ တခြား နည်းသွားမယ်။
(၇ )ရက်ခတ်မိရင်ပဲ မျက်စိမှုန်နေသူ ပြန်လင်းပြီး။ မျက်စိမှာ တိမ်ရှိရင် ပျောက်သွားမယ်။ မျက်စိအား အရင်ထက် ထူးထူးကဲကဲ ကောင်းလာ မယ်။
(၇) ရက် ဆက်တိုက် ခတ်ပြီးရင် (၁၅) ရက်လောက် နားရမယ်။ နောက် (၁၅) ရက်ပြည့်ရင် ပထမ (၇) ရက်သုံးခဲ့တဲ့ မျက်စဉ်းရေကို မသုံးရဘူး။
နောက်တစ်ခါ အသစ်ပြန်ပြီး ပန်းကိုစိမ် ရတဲ့မျက်စဉ်းရေကို (၇)ရက်ဆက်ခတ်။ (၇) ရက်ပြီးရင် (၁၅) ရက်နားရမယ်။
ဒီလို (၇) ရက်ခတ်၊ (၁၅) ရက်နား၊ (၃) ပတ်ပြည့်ရင် မျက်စိဝေဒနာတွေ ကင်းဝေးသွားပြီး။ မျက်စိမှုန်၊ မျက်ခိုးထွက်၊ မျက်မှန်တပ်ရသူ၊ မျက်မှန်လွတ်မယ်။
တိမ်ရှိရင် ပျောက်မယ်။ ဘာအန္တရာယ်မှ မရှိဘူး။ ဆေးနည်းက လွယ်တယ်။ ဒါပေမယ့် စည်းစနစ်ကျ လုပ်ဆောင်ရမယ်။
လက်တွေ့ ဆေးနည်းမို့ လက်တွေ့သာလုပ်ကြည့်အကျိုးရှိစေရမယ်”….
ဆေးနည်းပညာ ပေးအပ်လမ်းညွှန်ပေးခဲ့သော ကရင်ပြည်နယ်၊ နောင်လုံရှမ်းစုရွာ နမ့်ပန်ကျောင်းမှ ဆရာတော် ဦးနန္ဒဝံသ နှင့် ဆရာကြီး ဦးကြည်ဟန်တို့အား မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြု ဖော်ပြလိုက် ပါသည်။
ဝေဒနာရှင်အပေါင်းတို့ ကျန်းမာပါစေ။.. အဓိကအချက်လေးထုတ်နုတ်ဖော်ပြထားတာပါ။ လိုရင်တိုရင်းပေါ… ထားလည်းအိမ်စံပယ်လေးနဲ့စံပယ်ပွင့်တိုင်လုပ်ဆောင်ပါတယ်.၊တကယ်လည်းပျောက်ကင်းပါတယ်.။
ယုံကြည်စွာလုပ်ပါလေ…ဈေးကစံပယ်ပန်းတွေ တချို့ဆိုရင် မဲနယ်ဆိုးတာမို့ သတိထားစေချင်တယ်.အပင်ကကိုယ်တိုင်ခူးထားတာ စိတ်ချရတယ်….။
“မကျြစိမှုနျသူမြားအတှကျ ဆေးစှမျးကောငျးတဈလကျ(သို့) နတျမကျြစဉျး”
“မ နကျ စော စော မှာ စံ ပယျ ပငျ က စံ ပယျ ပနျး (၃) ပှငျ့ ခူး ယူ ရ မယျ။ ရေ ပွောငျ အောငျ ဆေး ရ မယျ။ စံ ပယျ ပငျ မ ရှိ တဲ့ သူ က လဲ စံ ပယျ ပနျး ရောငျး တဲ့ ဆီ က ဝယျ ပေါ့။
ဒါ ပေ မယျ့ ခပျ လတျ လတျ ကို ဝယျ ပါ။ နှမျး ရငျ မ ယူ နဲ့။ “အဲ ဒီ စံ ပယျ ပနျး ကို ဖနျ ခှကျ အ လှတျ တဈ ခု မှာ ထညျ့ရ မယျ။ နောကျ ရေ သနျ့ သနျ့ ဖနျ ခှကျ (၃)ပုံ (၂)ပုံ ထညျ့ ရ မယျ။
တဈနလေုံ့း စိမျထားရမယျ။ညမှာ မကျြစိကို ခတျခါနီး ပနျးကို ဖယျပဈလိုကျ၊ အဲဒီရကေို အဲဒီည မကျြစိကို ခတျ။
ပထမဦးဆုံး ခတျတဲ့နေ့ နံနကျမှာ မကျြစိမှာ ထူးထူးခွားခွား မကျြခြေးတှေ ပိတျနလေိမျ့မညျ။
အဝတျပှတဈခုကို ရဆှေတျပွီး မကျြစိကို ပှတျသတျ သနျ့ရှငျးမှု လုပျပေးရမယျ။
အဲဒီပနျးစိမျရကေို (၇) ရကျဆကျတိုကျ ခတျပေးရမယျ။ မကျြခြေးက တဈနေ့ တခွား နညျးသှားမယျ။
(၇ )ရကျခတျမိရငျပဲ မကျြစိမှုနျနသေူ ပွနျလငျးပွီး။ မကျြစိမှာ တိမျရှိရငျ ပြောကျသှားမယျ။ မကျြစိအား အရငျထကျ ထူးထူးကဲကဲ ကောငျးလာ မယျ။
(၇) ရကျ ဆကျတိုကျ ခတျပွီးရငျ (၁၅) ရကျလောကျ နားရမယျ။ နောကျ (၁၅) ရကျပွညျ့ရငျ ပထမ (၇) ရကျသုံးခဲ့တဲ့ မကျြစဉျးရကေို မသုံးရဘူး။
နောကျတဈခါ အသဈပွနျပွီး ပနျးကိုစိမျ ရတဲ့မကျြစဉျးရကေို (၇)ရကျဆကျခတျ။ (၇) ရကျပွီးရငျ (၁၅) ရကျနားရမယျ။
ဒီလို (၇) ရကျခတျ၊ (၁၅) ရကျနား၊ (၃) ပတျပွညျ့ရငျ မကျြစိဝဒေနာတှေ ကငျးဝေးသှားပွီး။ မကျြစိမှုနျ၊ မကျြခိုးထှကျ၊ မကျြမှနျတပျရသူ၊ မကျြမှနျလှတျမယျ။
တိမျရှိရငျ ပြောကျမယျ။ ဘာအန်တရာယျမှ မရှိဘူး။ ဆေးနညျးက လှယျတယျ။ ဒါပမေယျ့ စညျးစနဈကြ လုပျဆောငျရမယျ။
လကျတှေ့ ဆေးနညျးမို့ လကျတှသေ့ာလုပျကွညျ့အကြိုးရှိစရေမယျ”….
ဆေးနညျးပညာ ပေးအပျလမျးညှနျပေးခဲ့သော ကရငျပွညျနယျ၊ နောငျလုံရှမျးစုရှာ နမျ့ပနျကြောငျးမှ ဆရာတျော ဦးနန်ဒဝံသ နှငျ့ ဆရာကွီး ဦးကွညျဟနျတို့အား မှတျတမျးတငျ ဂုဏျပွု ဖျောပွလိုကျ ပါသညျ။
ဝဒေနာရှငျအပေါငျးတို့ ကနျြးမာပါစေ။.. အဓိကအခကျြလေးထုတျနုတျဖျောပွထားတာပါ။ လိုရငျတိုရငျးပေါ… ထားလညျးအိမျစံပယျလေးနဲ့စံပယျပှငျ့တိုငျလုပျဆောငျပါတယျ.၊တကယျလညျးပြောကျကငျးပါတယျ.။
ယုံကွညျစှာလုပျပါလေ…ဈေးကစံပယျပနျးတှေ တခြို့ဆိုရငျ မဲနယျဆိုးတာမို့ သတိထားစခေငျြတယျ.အပငျကကိုယျတိုငျခူးထားတာ စိတျခရြတယျ….။
သွေးစုနာ၊ မွေးကျွတ်နာအတွက် လက်တွေ့ဆေးနည်း။
[Zawgyi] သွေးစုနာ၊ မွေးကျွတ်နာအတွက် လက်တွေ့ဆေးနည်း။ ကျွန်တော်၏ ကိုယ်တွေ့ ဆေးနည်းများကို အများဝေဒနာရှင်များ သိရှိကုသနိုင်ရန် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။ လွန်ခဲ့သော (၈) တန်း ကျောင်းသားဘ၀လောက်ကပါ။ ကျွန်တော်၏ ဦးမင်းနှင့် အဒေါ်ရှိရာ မအူပင်မြို့နယ် ရေလဲကလေးကျေးရွာသို့ မရောက်တာကြာပြီဖြစ်၍ သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ မအူပင်မှ ရေလဲကလေးသို့ ဒေါဂျစ်ကားစီး၍ သွားရပါသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်၍ သုံးရက်ကြာသော် တင်ပါးတစ်ပြင်လုံး တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး သွေးစုနာများ မရေနိုင်အောင် ပေါက်ပါသည်။ ဆေးမြီးတိုများ လိုက်မေးရာ ဆေးနည်းမှာ – ထုံးသန့်သန့် (၁) ထုပ်၊ ပျားရည် (အစစ်) (၂) ကျပ်ခွဲသားခန့်၊ (အနည်းငယ်စီ)။၎င်းကို လက်ဝါးထဲထည့်ပြီး နယ်ပါ။ နှစ်မိနစ်ခန့်ကြာလျှင် ကျောက်ဖြစ်ပါသည်။ အမြန်နယ်ပြီး အနာပေါ် …
ဆားကို အသုံးပြုပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်သော မကောင်းတဲ့ အနံ့အသက်များကို ပျောက်စေနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ဆားကို အသုံးပြုပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်သော မကောင်းတဲ့ အနံ့အသက်များကို ပျောက်စေနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ ဆားသည်လူတို့၏ အစားအသောက်တိုင်းမှာမပါမဖြစ်ပါရသောအိမ်တိုင်းတွင်ရှိရသောမရှိမဖြစ်စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆားကိုဥတုဘောဇနကျမ်းတွင် “ဆားသည်ငန်သောအရသာရှိ၏။ သွေး သလိပ်ကိုသန့်ရှင်းစေ၏။အရသာကို တိုးပွားစေတတ်၏။အသားများကိုကြာ ရှည်ခံစေ၏။လွန်ကဲစွာစားသုံးပါမူသွေးကို တိုးစေ၏။ဒဏ်ရာများနှင့်ထိမိသော် စပ်၏” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ဆားကိုရှေးအခါကပင် မပုပ်အောင် မသိုးအောင်အချဉ်မပေါက်အောင်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အစားအသောက်များကိုမပုပ်မသိုးစေရန်စီမံခဲ့ကြပါတယ်။ဆားသည် ဘက်တီးရီးယားကိုနိုင်ပြီးမပုပ်မသိုးစေတတ်သည့်သတ္တိရှိပါတယ်။ဆားကို အစားအသောက်အပြင် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအတွက်ပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆားဖြင့် ရေချိုးခြင်း ရေချိုးတဲ့အခါမှာအိမ်သုံးဆားနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးအနှံ့ကိုပွတ်ပေးပါ။ အထူးသဖြင့်အနံ့ထွက်တတ်သောချိုင်းကြား၊ ပေါင် ခြံ နေရာများကို ဦးစားပေးပွတ်ပါ။ ပွတ်ပြီးတစ်မိနစ်ခန့် ကြာသောအခါမှ ရေဆက်ချိုးပါ။အဲဒီလိုပွတ်ပေးတာက မွှေးညှင်းပေါက်တွေမှာရှိနေတဲ့အနံ့ထွက်စေသည့်ဘက်တီးရီးယားအကြွင်းအကျန်တွေကင်းစင်သွားတာကြောင့်ချွေးနံ့နံတာသက်သာစေပါတယ်။ညောင်းညာကိုက်ခဲမှုတွေပြေပျောက်ပြီးအခိုးထွက်စေပါတယ်။ ခံတွင်းနံ့မထွက်အောင်သုံးခြင်း ခံတွင်းနံ့ အာပုပ်နံ့မထွက်စေရန် ဆားဖြင့် သွားတိုက်ခြင်း၊ ဆားဖြင့်အာလုပ်ကျင်းခြင်းပြုလုပ်ပါ။ ခြေထောက်အနံ့မထွက်အောင်သုံးခြင်း ညဘက်ခြေဆေးတဲ့အခါမှာလည်း ခြေဖဝါးဆားပွတ်ပြီး ရေဆေးခြင်းဟာလည်း အနံ့အသက်ကင်းစေနိုင်တဲ့အပြင် …
ခံတွင်းရှိ အပူကန်၊နာတာတွေကို သိသိသာသာ သက်သာ ပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလမ်းများ
Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ခံတွင်းရှိ အပူကန်၊နာတာတွေကို သိသိသာသာ သက်သာ ပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလမ်းများ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အပူဓာတ်များတဲ့သူတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိတဲ့ ခံတွင်းထဲမှာ အပူကန်နာတွေပေါက်ခြင်းဟာ အစာစားတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာလည်း နာကျင်မှု ဝေဒနာကို ခံစားရလေ့ ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ ခံတွင်းထဲက အပူကန်နာတာတွေကို အချိန်တိုအတွင်း သက်သာ ပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို မိုမိုလေး စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် အခုလိုပဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၆။ ဆားနဲ့ ရေခပ်နွေးနွေးကို ရောစပ်ပြီးတော့ ပလုတ်ကျင်းပေးခြင်းကလည်း အနည်းငယ် စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း နိုင်ပေမယ့် အပူကန်နာတာတွေကို အမြန်ဆုံး ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၅။ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဟာ ခံတွင်းမှာ ဖြစ်တဲ့ အပူကန်နာတာတွေအပြင် လည်ချောင်းနာတာနဲ့ သွားဖုံးရောင်တာတွေကိုပါ ပျောက်ကင်းစေနိုင်တာကြောင့် …
Users Yesterday : 1334
This Month : 31633
This Year : 202859
Total Users : 497992
Total views : 2051012